सं’क्रमण नभएको पालिकामा विद्यालय सुरू गर्ने कि ? «
सं’क्रमण नभएको पालिकामा विद्यालय सुरू गर्ने कि ?
प्रकाशित मिति : 17 September, 2020 7:03 pm
को’रोना लकडाउनले नेपालमा विद्यालय स्तरका मात्र करिब ८३ लाख विद्यार्थी प्र’भावित छन्। उनीहरूमा कहिले विद्यालय फर्कने भन्ने अन्यौल छ। सं’क्रमण बढ्दै गर्दा अझै लामो समय विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्ने र यो शैक्षिक सत्र पूरै खेर जाने सम्भावना छ। तर, हाम्रो विश्लेषणमा स्थानीय अवस्था हेरेर अहिले नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। हामीले यसो भन्नुको कारण छ। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा दैनिक आउने सं’क्रमण संख्या हेर्दा हामी ग’म्भीर मोडमा छौं भन्ने देखिन्छ। तर, यही संख्या गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले स्थानीय वस्तुस्थिति र संघीयताको मर्म आ’त्मसात् गरेका छैनौं भन्ने बुझिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी को’रोना सं’क्रमित छन्। सं’क्रमणले सबै ७७ जिल्ला छोइसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक सही भए पनि प्रस्तुति ग’लत छ। ग’लत रूपमा प्रस्तुत तथ्यांकले अक्सर चाहिनेभन्दा बढी त्रा’स र अन्यौल उत्पन्न गराउँछ। संघीयताको अभ्यासमा गइसकेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। को’भिडको जो’खिम व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन सञ्चालन, स्थानीय स्तरमा देखिएको सं’क्रमण पहिचानमा पनि स्थानीय सरकारहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्।
यति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण गरिने को’भिड संख्यामा पुरानै केन्द्रीकृत प्रणाली हाबी देखिन्छ। त्यो कसरी भने, हामीकहाँ को’भिड सं’क्रमितको तथ्यांक जिल्लाका आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्लाभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र कहाँ कति सं’क्रमित छन् भन्ने तथ्यांक पाउनै मुश्किल छ। हामीले nepalcorona.com मा रहेको API बाट तथ्यांक निकाल्दा हालसम्म १७० वटा पालिकामा मात्र सं’क्रमण देखिन्छ। देशका ७५३ पालिकामध्ये २३ प्रतिशतमा मात्र कुनै समयमा सं’क्रमण भएको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात्, ७७ प्रतिशत पालिकामा कुनै सं’क्रमण देखिएको छैन।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं वा चितवनमा जस्तो जो’खिम छ, रामेछाप वा सोलुखुम्बुमा छैन। कुनै अवस्थामा एउटै जिल्लाभित्रै पालिकापिच्छे अवस्था फरक हुन सक्छ। दाङको सदरमुकाम रहेको घोराही र छिमेकी बंगलाचुली पालिकामा भदौ दोस्रो साता ६२ जना सक्रिय सं’क्रमित थिए। त्यही बेला पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा दुई जनामा मात्र सक्रिय सं’क्रमण थियो। तै पनि सबै पालिकाहरूमा राष्ट्रिय वा जिल्ला सदरमुकामबाट तोकिएका लकडाउन र नि’षेधाज्ञा सोलोडोलो लागू हुन्छन्। यसले सं’क्रमण नभएका वा अत्यन्तै कम भएका पालिकामा पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
पालिका आफैंले ठूलो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। पहिलेका गाविस अहिलेको पालिकाका वडा बनेका छन्। ग्रामीण वडाहरूमा त झन् सं’क्रमणको जो’खिम अत्यन्त कम छ भनेर अनुमान लगाउन केही तथ्यहरूले प्रशस्त आधार दिन्छन्। तुलसीपुरकै हकमा हेर्दा पछिल्लो ५-६ महिनामा ११८ जनालाई सं’क्रमण देखियो। यसमा क्वारेन्टिनमा रहेकाबाहेक हजार जनाभन्दा बढी जो’खिममा देखिएकालाई समुदाय स्तरमा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। सं’क्रमितमध्ये धेरै निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने सक्रिय सं’क्रमित ३० जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। तुलसीपुरका १९ वडामध्ये ५० प्रतिशतमा भदौ अन्त्यतिर शून्य सं’क्रमण देखिन्छ। बजार क्षेत्रबाहिरका वडामा त सं’क्रमण एक वा दुई जनामा मात्र छ।
दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा केही बजार क्षेत्र छ भने ग्रामीण क्षेत्र प्रशस्तै छन्। जनसंख्याका हिसाबले सक्रिय सं’क्रमण ०.०१५ प्रतिशत मात्र छ। पालिकाभित्र झन्डै १४० वटा विद्यालयमा ४० हजार विद्यार्थी छन्। हामीले यी वडाहरूको स्थानीय अवस्था हेरेर सुरक्षा मापदण्डका साथ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं। देशभरको जिल्लागत तथ्यांकलाई पालिकापिच्छे वर्गीकरण गर्ने भने लगभग अवस्था यस्तै आउन सक्छ। हामीले सं’क्रमण धेरै भएको ठानेका जिल्लाभित्र पनि थुप्रै पालिका सं’क्रमणरहित वा कम सं’क्रमित हुन सक्छन्, जहाँ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जस्तै जिल्लाका आधारमा हेर्ने हो भने पनि सबैतिर अवस्था डरलाग्दो छैन। उदाहरणका लागि, ठूला सहर र भारतसँग सीमा जोडिएका तथा आवतजावत बढी हुने जिल्लामा सं’क्रमण संख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै बढी छ। हालसम्म बढी सं’क्रमण रहेको काठमाडौं जिल्लामा ७६११ जना सं’क्रमित (१५%) छन् भने पर्सामा २५०० (५%) र सर्लाहीमा २१०० (४%) जना सं’क्रमित छन्। सम्पूर्ण सं’क्रमणको झन्डै ५० प्रतिशत १० जिल्लामा छन् भने बाँकीमध्ये ७५ प्रतिशत २३ जिल्लामा छन्। पछिल्लो समयको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने त संक्रमण दर केही जिल्लामा मात्र बढी देखिन्छ। सेप्टेम्बर १ देखि ९ सम्म देशभरी ९७५९ जना सं’क्रमित छन्। त्यसको ३१ प्रतिशत काठमाडौं जिल्लामा मात्र छन् भने उपत्यकाका तीनै जिल्लामा ३८ प्रतिशत सं’क्रमित छन्।
संक्र’मण बढी देखिएको माथिल्लो दस जिल्लामा देशभरका कुल सं’क्रमितको ६४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, ५० प्रतिशत जिल्ला अर्थात् ३८ वटामा ९५ प्रतिशत सं’क्रमण देखिन्छ। त्यसैले सरकारले सं’क्रमणको तथ्यांक सही विश्लेषण गरेर कम जोखिम रहेका पालिकाहरूमा सतर्कतासहित सीमित रूपमा भए पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति किन नदिने ? सरकारको यो निर्णय नै सीमित स्रोत-साधन भएका लाखौं विद्यार्थीको निम्ति सिकाइको अवसर हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। यसबाहेक लकडाउनले घर-घरमा बस्न बाध्य विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोबाट सञ्चालन गरिने वैकल्पिक शिक्षा पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। तर, यसमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको पहुँच अत्यन्त कम देखिएको छ।
वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुअघि नीतिशाला नेपाल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मिलेर विद्यार्थी र शिक्षकको प्रविधि पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेका थिए। उक्त सर्वेक्षणअनुसार तुलसीपुरमा १५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीको घरमा कम्प्युटर रहेको पाइयो। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको घरमा त झन् यो संख्या ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिन्छ। त्यसैगरी ६७ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा टेलिभिजन र ७० प्रतिशतको घरमा रेडियोको पहुँच देखियो। मोबाइल फोन झन्डै ९८ प्रतिशत घरमा देखिन्छ। भौगोलिक, आर्थिक र उमेर समूह (कक्षा) बीच पनि सूचना प्रविधिको पहुँचमा निकै विभेद छ। सामान्यतया सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँच राम्रो छ।
इन्टरनेटको पहुँच औसतमा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा देखिए पनि घरमै केबल वा वाइफाई भएका सरकारी विद्यार्थी जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखियो। धेरै विद्यार्थी वा अभिभावकले फोनको डेटा चलाएर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको सुनाए। मोबाइल डेटासहित इन्टरनेट पहुँच पुग्ने निजी विद्यालयका हकमा ६९ प्रतिशत विद्यार्थीको सम्भावना देखिन्छ भने सरकारीका हकमा यो करिब ३० प्रतिशत मात्र छ। यी सबै अवस्था हेर्दा ‍सबभन्दा धेरै पहुँच रहेको रेडियो प्रयोग गरी हामीले तुलसीपुरमा शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउने प्रयास गर्यौं। त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि विद्यालयबाट शिक्षकहरू समुदाय स्तरमा परिचालन गर्न आह्वान गरियो। शिक्षकलाई समुदायमा परिचालन गर्दा कोरोना सं’क्रमणको जो’खिम भएकाले अन्य अ’ग्र’पंक्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई जस्तै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत् सबै शिक्षकलाई को’भिड बिमाको कार्यक्रम अघि सार्यौं।
ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएका बस्तीमा विभिन्न कक्षा, उमेर समूह, सिकाइ स्तर र आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउन पनि चुनौतीपूर्ण देखेपछि हामीले आंशिक रूपमै भए पनि विद्यालय सञ्चालनको प्रयास थाल्ने निधो गरेका छौं। यसका लागि तुलसीपुरमा सं’क्रमणको जो’खिम भएका वडा र विद्यालयलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी एउटा कक्षामा भौतिक दुरीसहित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय कार्यायोजना निर्माण गरिएको छ। यही कार्ययोजनामा रहेर विद्यालयहरूले आ-आफ्नो वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्छन् र आवश्यकता हेरेर दुई वा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्।
यसरी कक्षा चलाउँदा सबै शिक्षक र विद्यार्थीले कक्षाकोठा र बाहिर भौतिक दुरी पालना गर्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानी वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। भोलि सं’क्रमण संख्या र जो’खिम बढेको अवस्थामा हामीले ती कक्षाहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई यसरी अगाडि बढाउन सक्यौं भने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
‘मम्मी ! बाई बाइ ! थरथर काप्दै उसको मुखबाट निस्केको एउटा अस्पष्ट शब्द हावाको